Isikhathi esifanele sokufaka inzalo enkomeni yobisi
Ngemuva kokukhalisa, isibeletho senkomo siphume futhi sishintsha emuva usayizi ojwayelekile. Isikhathi sokuvuselela singasuka ezinsukwini ezingu-25 kuya kwezingu-50. Uma inkomo ithola ubunzima ekubelethweni, ingabangela ukutheleleka kwesibeletho sayo futhi lokhu kungandisa isikhathi sokubuyiselwa kwesibeletho.
Ukushisa okujwayelekile okubuyiselwa emuva kokubuyiselwa kwesibeletho. Ngemva kwalokho izinkomo zifika ekushiseni njalo ezinsukwini ezingu-19 kuya kwezingu-21.
Ukuhamba ngebhayisikili okushisa kuhilela ukuthuthukiswa kwe-follicle kuma-ovari ukulungiselela ukukhishwa kwe-ovum yokukhulelwa. Uma kungenjalo ukukhulelwa kwenzeka, inqubo iphinda yona.
Kunezinhlobo eziningi zezibonakaliso zezinkomo ezibonisa lapho zishisa, kodwa isibonakaliso esihle kakhulu sokuthi zimi ukuze zikhonjiswe yinkunzi noma zifakwe. Futhi hlola ukukhishwa kwe-mucus okucacile okugeleza kusuka ku-vulva. Ukuvuthwa (lapho i-follicle iqhuma ukukhulula i-ovum) kwenzeka cishe amahora angu-12 ngemva kokuphela kokushisa okumile.
Indlela Yokufaka Inzalo enkomeni yobisi (AI)
Ngenkathi i-AI ibhekwa njengendlela elula, inqubo efanele kufanele ilandelwe inkomo ngayinye. I-Semen ye-AI igcinwe ku-0.5 ml wezinhlayiya zepulasitiki ngaphakathi kwesibhakela sembewu (tank) ngo -19 ° C.
Ezinye izinyathelo eziyisisekelo ze-AI zihlanganisa lokhu okulandelayo: isilwane se-thaw endaweni eqondile (eqondile) esitsheni se-thermos equkethe amanzi afudumele ku-35 ° C. Khipha utshani emva komzuzu owodwa, usule utshani usebenzisa indwangu yamaphepha bese ufaka utshani ngaphakathi kwenduku yokuhlwitha (efusiwe).
Sika ukuphela komshini ukuvumela umuthi ukuba uphonswe ngaphandle bese ufaka umgogodla wepulasitiki phezu komshini nomsongo wokuvikela ukulwa nezifo. Manje, faka ipistole emgodleni wezinkomo bese uyiqondisa ngokucophelela uye ngasesigodlweni somlomo bese ubeka isilwane nje ngomlomo wesibeletho.
Ngemuva kwalokho, lesi sibeletho singasetshenziselwa ukugqugquzela ukuhamba kombindi ngaphakathi kwempondo yesibindi. Gcina inkomo ihluke futhi ithule okwesikhashana ngemuva kokusabalalisa.
Uma insemination ingazange iphumelele, inkoma izobe ishisa, izinsuku ezingu-19 kuya kwezingu-21 ngemuva komjikelezo wayo wokushisa owedlule.